Units sy fonenana
Mitondra tena eo amin'ny fitondrana baolina
China Ningbo Cixi LGGB Bearings Co., Ltd. dia miorina ao Cixi Ningbo, Zhejiang Povince., Dia mpamokatra iray izay manam-pahaizana manokana amin'ny bearings.
Serivisy LGGB na ny tsena OEM na mpaninjara. Ny bearings dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny Automotive, indostrialy, harena ankibon'ny tany, fambolena, fikirakirana fitaovana ary fitaterana. Noporofoin'izy ireo fa nahomby tamin'ny fampiharana tsikera izy ireo, tsy nametraka fisalasalana momba ny kalitao sy ny fahatokisana ny vokatray. LGGB ny marika LGGB dia nitombo lasa iray amin'ireo lehibe indrindra sy be mpitia indrindra Bearings Suppliers any Shina.
Baolina lalin-tsaina lalina mitondra andiany 6000
Baolina lalin-tsaina lalina mitondra andiany 6200
Baolina lalovay lalina mitondra andiany 6300
Baolina lalin-tsaina lalina mitondra andiany 16000
Taper Roller Bearing Metric andiany
Taper Roller Bearing Inch andiany
Bearing Housings UC andiany
Bearing Housings SA andiany
Toeram-piantsonana sy Fonenana UCF Series
Toeram-bita sy fitehirizam-bokin'ny UCP Series
Mitondra seza HC andian-dahatsoratra
Ny fandraisan'anjaran'ny orinasa amin'ny mombamomba ny fampirantiana
Fa maninona no avo loatra ny mari-pana entin'ny paompin-drano ary nahoana?
1. Ny fanondrahana na ny tsy fanitsiana ny vatan-drano paompy dia hahatonga ny paompin-drano hihozongozona ary hiteraka hafanana na fitafiana amin'ny fiterahana. 2. Noho ny fitombon'ny fihenan'ny axial (ohatra, rehefa mavesatra ny kapila mandanjalanja sy ny peratra fifandanjana ao anaty paompy rano), ny enta-mavesatra entin'ny fiakarana ...